Jesu Kristu—Mesiya Akapikirwa | Bhaibheri Rinodzidzisei?
KUTI atibatsire kuziva Mesiya, Jehovha Mwari akafuridzira vaprofita vakawanda vanotaurwa muBhaibheri kuti vape mashoko akadzama pamusoro pokuberekwa, ushumiri, uye rufu zvoMununuri uyu akapikirwa. Uprofita hwose uhwu huri muBhaibheri hwakazadzika pana Jesu Kristu. Hwakarurama uye hwakadzama zvinoshamisa. Kuti tienzanisire izvi, ngatikurukurei uprofita hushomanana hwakafanotaura zviitiko zvaiva nechokuita nokuberekwa kwaMesiya uye nguva yaaiva muduku.
Muprofita Isaya akafanotaura kuti Mesiya aizova muzukuru waMambo Dhavhidhi. (Isaya 9:7) Zvechokwadi Jesu akaberekerwa mudzinza raDhavhidhi.—Mateu 1:1, 6-17.
Mika, mumwe muprofita waMwari, akafanotaura kuti mwana uyu aizova mutongi uye kuti aizoberekerwa mu“Bhetrehema Efrata.” (Mika 5:2) Panguva yakaberekwa Jesu, paiva nemataundi maviri muIsraeri ainzi Bhetrehema. Rimwe raiva pedyo neNazareta munharaunda yokumusoro kwenyika yacho, uye rimwe raiva pedyo neJerusarema muJudha. Bhetrehema raiva pedyo neJerusarema raimbonzi Efrata. Jesu akaberekerwa mutaundi iroro, sezvakanga zvafanotaurwa nouprofita chaizvo!—Mateu 2:1.
Humwe uprofita hwomuBhaibheri hwakafanotaura kuti Mwanakomana waMwari aizoshevedzwa “kuti abude muIjipiti.” Paaiva mwana, Jesu akaendeswa kuIjipiti. Akadzoswa pashure pokufa kwaHerodhi, izvi zvichizadzisa uprofita hwacho.—Hosiya 11:1; Mateu 2:15.
Pachati iri papeji 200, magwaro akarongwa pasi pomusoro unoti “Uprofita” ane mashoko akadzama ane chokuita naMesiya. Tapota aenzanise nemagwaro akarongwa pasi pomusoro unoti “Kuzadzika.” Kuita izvozvo kuchasimbisazve kutenda kwako kwokuti Shoko raMwari nderechokwadi.
Paunenge uchiongorora magwaro aya, yeuka kuti aya ane uprofita akanyorwa mazana emakore Jesu asati aberekwa. Jesu akati: “Zvinhu zvose zvakanyorwa mumutemo waMosesi neZvakanyorwa nevaprofita nomuMapisarema pamusoro pangu zvinofanira kuzadzika.” (Ruka 24:44) Sezvaungaona muBhaibheri rako pachako, chokwadi zvakazadzika—zvose zvazvo!
UPROFITA HUNE CHOKUITA NAMESIYA
Aiva wedzinza raMambo Dhavhidhi
Jehovha akamuti aiva Mwanakomana wake
Akapinda muJerusarema akatasva mbongoro
Akanyarara pamberi pevapomeri vake
Mijenya yakakandwa panguo dzake
Akatukwa paaiva padanda
Hapana pfupa rake rimwe rakatyorwa
Akavigwa pamwe nevapfumi
Akamutswa asati aora
Akakwidziridzwa kurudyi rwaMwari